विषादीको मात्रा परीक्षण हुनुपर्छ | Mechikali Daily
विषादीको मात्रा परीक्षण हुनुपर्छ
Posted By: Mechi Kalion: १७ बैशाख २०७४, आईतवार ०५:१५
नेपालमा आँपको सिजन सुरु भएको छैन । तर, अहिले नेपाली बजारमा आँप छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । फागुनको अन्तिम सातादेखि नै नेपाली बजारमा आँप पाइन थालेका हुन् । अहिले बजारमा पाइने आँप हेर्दा यत्ति आकर्षक छन् कि, सबैलाई खान मन लाग्छ । तर, यस्ता आँप स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हानिकारक मानिने सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।
हेर्दा आकर्षण देखिए पनि अहिले बजारमा उपलब्ध आँपमा खास स्वाद भेट्टिँदैन । जेठको अन्तिमतिर स्थानीय स्तरमा फलेर पाक्ने आँपको जस्तो स्वाद अहिले बजारमा पाइने आँपमा पाइँदैन । मूलतः भारतबाट भित्रिएका यस प्रकारका आँप विषादीको प्रयोग गरी पकाइएको कारण यस्तो भएको हो भन्ने अनुमान सबैको छ ।
नेपालमा अहिले विभिन्न नाका हुँदै ठूलो परिमाणमा यस प्रकारका आँपहरु आइरहेका छन् । बुटवलको कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा दैनिक ४५ टन भारतीय आँप अहिले आईरहेको छ । तर, यस्ता आँपमा विषादीको मात्रा के–कस्तो छ भनेर त्यसको परीक्षण भएको पाइँदैन । अचेल विषादी प्रयोग नै नगरेका प्राङ्गारिक रुपमा उत्पादन भएका खाद्यबस्तु पाउन मुस्किल पर्छ । तर, धेरै विषादी राखेर तयार पारिएका फलफुल तथा तरकारी खाँदा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ ।
वास्वतमा आँपको परीक्षण नहुँदा उपभोक्ताहरू मन्द विष नै सेवन गर्न बाध्य भएका छन् भन्दा अन्यथा नहोला । धेरै उपभोक्तालाई यस प्रकारको आँप कहाँबाट आँउछ, ? कसरी सिजन सुरु नहुँदै पकाइन्छ भन्ने जानकारी नै छैन । यस प्रकारको आँप खाँदा के–कस्तो असर पर्छ भन्ने जानकारी पनि उनीहरुलाई नहुनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो ।
खोयाँ पनि छिप्पिई नसकेको आँप हाम्रो स्वास्थ्यको हितमा छैन भन्ने कुरा सर्वसाधारण सबैले बुझ्नुपर्छ । प्राकृतिक रूपमा पाकेका आँपमा जुन प्रकारको पौष्टिक तत्व पाइन्छ; अहिले बजारमा पाइने बेमौषमी आँपमा पाइँदैन । हाम्रो मुलुकमा तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा के कति छ भन्ने यकिन गर्न प्रयोगशालाको व्यवस्था भए पनि त्यसको पहुँच सबैतिर छैन । भारतबाट आउने यस प्रकारका आँपको परीक्षण नाकामैं गर्नुपर्ने हो । तर यसतर्फ कसैको चासो गएको पाइँदैन । अहिले आँपको सन्दर्भ उठे पनि अन्य फलफुल तथा तरकारीमा यस प्रकारको समस्या रहेको पाइन्छ ।
उपभोक्ताले मूल्य चुकाएपछि स्वास्थ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउनुपर्छ तर हामीकहाँ यसबारे खास बहष हुँदैन । उपभोक्तालाई गुम्राहामा राखेर हरेक वस्तुको बिक्री–वितरण भइरहेको छ । अहिले बुटवलमा दैनिक २२ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको भारतीय आँप भित्रिँदै आएको छ । यत्ति ठूलो परिमाणमा आउने आँपका बारेमा खास कुरा के हो ? यसमा विषादीको मात्रा कति छ भन्ने कुरा यकिन गरिनुपर्ने हो । तर यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
भारतको दिल्ली, चेन्नइबाट तोतापुर र वेगनफूली नामका दुई प्रजातिका आँप नेपाल आइरहेका छन् । काँचो आँप टिपेर क्रेटमा विषादी र आँप राखेर नेपाल पठाइने र यहाँ आउन ५ दिन लाग्न नेपाल आउँदासम्म आँप पूर्ण रूपमा पाकेजस्तो देखिने बताइन्छ । रसायन प्रयोग गरी पकाएको आँप खानाले पेट दुख्ने, आँखामा प्रभाव पार्ने, मुटुमा प्रभाव पार्ने, जिब्रो टर्रो हुने र स्वाद नआउने भएकाले यस्ता आँप खानुअघि उपभोक्ता आफै सचेत बन्नुपर्छ । आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरिएन भने त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ ।